Xiisad ka taagan Dhoobleey | KEYDMEDIA ONLINE
Xiisad ka taagan Dhoobleey
DHOOBLEEY(KEYDMEDIA) Wararka naga soo gaaraya degmada dhoobleey ee gobalka J.hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeysa Alshabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowlada KMG ah.
Xiisada deegaankaasi ka taagan ayaa ka danbeysay kadib markii xalay halkaasi labada dhan ay duqeymo xoogan isku weedaarsadeen.
Xogaha la helayo waxa ay sheegayaan in tirada Dhimashada ay ka badan tahay 20-Ruux halka dhaawacyadana ay caga cageynayaan 40-Ruux oo rayid u badan madaama aan la ogaan Karin qasaaraha Shabaab duqeynta kasoo gaartey.
Degmada dhoobleey ayaa xiliya kale duwan waxaa labada dhan dowlada iyo Shabaab ku dhex maray dagaal qasaaro sababay, iyadoona labada dhinac ee dagaalamaya ay ku loolamayaan gacan ku heynta magaaladaasi oo ay u aragsanyihiin in ay tahay mid istaraatiijiyad wanaagsan leh.
IGAD oo xil u magacaawday aqoon yahan Nuur Maxamuud
Warar 7 March 2021 19:43
Xoghayaha guud ee Urur goboleedka IGAD, Dr Workneh Gebeyehu ayaa manta Afhayeenkiisa u magaacay Mudane Nuur Maxamuud Sheekh.
Warar 7 March 2021 18:48
Wakiil hore oo AU-da u qaabilsanaa Soomaaliya oo geeriyooday
Warar 7 March 2021 18:28
Warar 7 March 2021 16:51